Izimvo zokwenza iikhalenda zantlandlolo ezi-5 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iingcamango zokwenza iikhalenda ezi-5 zokuqala
Emva konyaka ode kakhulu kwaye ubukhali kakhulu, akukho nto ilunge ngakumbi yokuqalisa ihlobo kunokuba ndikunike ingcebiso ukuze ube nemibono yokuyila ezinye iikhalenda ezintle nezantlandlolo ukwamkela ihlobo.
Ke ukuba into oyifunayo kukufunda njani yenza iikhalenda ngokulula nangokukhawuleza uqobo lwabaxhasi bakho, ungaphoswa leli nqaku.
1 Iikhalenda zantlandlolo ezi-5 onokuthi uzenze
1.2 Ikhalenda ye-CMYK
1.3 Ikhalenda yeNyanga
1.4 Ikhalenda yeDurido Doodles
1.5 Ikhalenda enye esixhenxe
Iikhalenda zantlandlolo ezi-5 onokuthi uzenze
Le khalenda ine ifomathi enye yeposta, Lo ayingomsebenzi wobugcisa kuphela, ikwangumthombo wokufumanisa okumangalisayo.
Ukuwongwa ngamabhaso amaninzi kunye nokukhankanywa kwihlabathi liphela, yile ngaphezulu kwekhalenda elulaIkhalenda yeAnaptár ikunika ulwazi oluninzi, idatha malunga neNyanga kunye nedatha malunga neLanga, ikwakunika isikhokelo kwiintshukumo ezinazo iiplanethi esibhakabhakeni kwinyanga nganye kwaye ngenxa yamalungiselelo obuso ikhalenda engakholekiyo ikubonisa Inokunika idatha eninzi ebandakanyiwe ngaphakathi kobunzima kwaye kwangaxeshanye ilula kakhulu.
Le khalenda onokuyithenga kwi isitoreji Olu hlobo, kodwa kufanele kuqatshelwe ukuba ayifumaneki kuwo onke amazwe.
Abaqulunqi abakhulu abayinxalenye yesitudiyo Vonfreyhold Unxibelelwano olubonakalayo, Yiza usinike ikhalenda enoyilo olugqwesileyo nakowuphi na umzobi.
Le khalenda ineseti eyakhelweyo ye Imibala engama-365 eyahlukileyo kwi-CMYK, eyahlukileyo kusuku ngalunye lonyaka. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ngamnye wale mibala unokubola kwawo kwi-CMYK kananjalo kukufa okusikiweyo ukuze emva kokuba uyisebenzisile ungayikrazula kwaye uyiqhoboshele kwibhokisi yememori edityaniswe nekhalenda, uya kuba nakho ukwenza ivoti ngayo yonke imibala oyisebenzisileyo kulo nyaka.
Umzobi owaziwayo UAlec Trhobodeau, isibonisa uyilo lwekhalenda yenyanga ene-limited edition yamawakawaka okuvelayo, le khalenda isibonisa zonke izigaba ezahlukeneyo zenyanga sizakuhamba kulo nyaka.
Le yikhalenda enomdla, nangaphezulu kwayo nayiphi na into ngenxa yoshicilelo lwayo olucokisekileyo kunye nolona luphezulu, xa uyithenga, isayinwe kwaye ibhalwe ligcisa.
Ungayithenga ikhalenda apha.
Ikhalenda yeDurido Doodles
ESlovenia uya kuyifumana le yodumo Ivenkile yokuhombisa Oko kusinika ubugcisa obothusayo kunye neengcamango zangaphambili zokuhombisa amakhaya ethu.
Inoluhlu olubanzi lweekhalenda ezahlukeneyo, kubandakanya eyodwa ekhethekileyo enobuhle kwaye imnandi kakhulu Isandla esenziwe ngama-doodle. Ezi khalenda zidumileyo zinomboniso kwaye zigqityiwe ngomthi ngexabiso elifanelekileyo kwaye ungayithenga kweyakho isitoreji okanye ungabakhangela kwinethiwekhi yoluntu iTwitter.
Ikhalenda enye esixhenxe
Ukuba into oyifunayo kukuba unayo ikhalenda entle kakhulu kwaye ekumgangatho ophezulu, yeka ukujonga.
UKristinaa krogh Izisa esona sisombululo sisiso kule ngxaki. Oku yi ikhalenda eprintwe kwi-175 gramEyona nto ibaluleke kakhulu, yenziwe ngokushicilela i-letterpress yobhedu. Le yeyona khalenda ilungileyo yokubeka eludongeni lwegumbi eliphambili okanye iofisi, ihlala ibekwa kumagumbi okuhlangana kwaye sinokuyibeka kwigumbi lokuhlala ukuze siyizalise ngobunewunewu nobuhle.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ixabiso linokubiza kancinci ngenxa yezixhobo isetyenziselwa ukuveliswa kwayo, kodwa kufuneka ikhunjulwe nento yokuba uhlobo lokushicilela olwenziwe ngethusi aluhlali lunoqoqosho kakhulu.
Kodwa ukuba ufuna ntoni ngu Uyilo olulula ngaphandle kokuchitha imali Unokuzikhuphelela iitemplate zasimahla kwi-Intanethi, kukho uyilo lweekhalenda ezininzi kwaye unokufumana enye entle onokuyiprinta kwaye uyibeke kwigumbi olifunayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iingcamango zokwenza iikhalenda ezi-5 zokuqala
Ubuncwane obufihliweyo bobuchule
Guqula umbala weenwele ngeFotohop